नेपालमा डेल्टा प्लस भेरियन्टसँगै तेस्रो लहरको सम्भावना कति? यसो भन्छन् विज्ञहरू – Health Post Nepal
नेपालमा डेल्टा प्लस भेरियन्टसँगै तेस्रो लहरको सम्भावना कति? यसो भन्छन् विज्ञहरू
२०७८ असार १३ गते १६:१९
नेपाललाई कोरोनाको दोस्रो लहरले नराम्रोसँग प्रभावित बनायो। केही दिनयता संक्रमणदर घट्दो क्रममा रहेकाले निषेधाज्ञा पनि खुकुलो बन्दै गएको छ।
भाइरोलोजिष्ट तथा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पुर्व निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार दोस्रो लहरका लागि डेल्टा भेरियन्ट प्रमुख जिम्मेवार थियाे।
तर, केहीदिनअघि मात्र ‘डेल्टा’ भेरियन्टमा थप उत्परिवर्तन (म्युटेसन) प्रमाणित भइसकेको छ।
‘डेल्टा प्लस भेरियन्ट’ ले कोरोनाविरुद्ध अहिले मानिसलाई दिइएको खोपलाई समेत कमजोर बनाउने चिन्ता थपिएको छ।
योसँगै नेपालमा पनि तेस्रो लहर आउने सम्भावना बलियो भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
‘डेल्टा प्लस’ नेपालमा पनि भेटिएको ए वाई १ भेरिअन्ट हो।
नेपालमा हाल दैनिक २ देखि ३ हजारको हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। कुल परीक्षणको अझै पनि २० प्रतिशतभन्दा माथिमा संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ।
यो संक्रमणदर पनि उच्च हो।
दोस्रो लहरको निम्त्याउन भीडभाड, सभा–सम्मेलन र जुलसलाई प्रमुख कारक तत्व थिए।
तर, यस्ता गल्ती पुनः दोहोरिए तेस्रो लहर छिट्टै आउने जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्।
नेपालका लागि अझै पनि संक्रमणको जोखिम कायम नै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन्।
‘अहिले पनि हामी जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौं। असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै गएको छ,’ डा। पौडेल भन्छन्, ‘ तेस्रो लहर फैलिनमा मानिस को व्यवहारमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ।’
भीडभाड हुँदै जाने र कोभिडको मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने छिट्टो भाइरसलाई फैलन मद्धत पुग्ने उनको भनाइ छ।
नयाँ भेरियन्टबाट कत्तिको खतरा?
नेपालमा दोस्रो लहरका लागि ‘डेल्टा भेरिएन्ट’ प्रमुख जिम्मेवार मानिन्छ। जसका कारण हजारौंको संख्यामा मानिसको मृत्यु भयो। नेपालमा दोस्रो लहरमा युके भेरियन्टका साथै डेल्टा भेरियन्ट फैलिएको थियो।
तर, दोस्रो लहरमा सिभियर निमोनिया बनाउने काम बढी ‘डेल्टा भेरिऐन्ट’बाट भएको पुष्टि भएको डा. पाण्डे बताउँछन्।
‘डेल्टाकै कारणले धेरै मानिसहरू संक्रमित तथा ज्यान गुमाउन पर्‍यो। तर, केही दिन अगाडि ९ जनामा ‘डेल्टा प्लस’ देखिएको छ। तर, कति संख्यामा फैलिसकेको छ अझै एकिन भएको छैन,’ डा. पाण्डेले भने।
डेल्टा प्लसले गर्दा तेस्रो लहर आउने सम्भावना देखिएको डा. पाण्डेको भनाइ छ।
विज्ञहरूले ‘डेल्टा प्लस’ भेरिएन्टलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक भेरिएन्ट हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यो भेरियन्ट नेपाल लगायत ११ देशमा पुष्टि भइसकेको छ।
डा. पाण्डेका अनुसार ‘डेल्टा प्लस’ गर्दा भाइरस सिधैं फोक्सोमा टासिँन सक्ने क्षमता राख्दछ।
जसका कारण धेरै मानिसमा सिभियर निमोनिया हुने हुन्छ। खोप लगाएपछि तथा संक्रमित भएपछि एन्टिबडी अर्थात् रोगसँग लड्न सक्ने लड्ने क्षमता विकास हुन्छ।
तर, ‘डेल्टा प्लस’ले एन्टिबडीलाई कमजोर बनाइदिने पाइएको डा. पाण्डे बताउँछन्।
विभिन्न कारणले गर्दा तेस्रो लहर आउन सक्ने यथेष्ठ प्रमाण रहेको डा. पाण्डेको भनाइ छ।
लकडाउन मात्रै गरेर अन्य रोकथामका काम नगरेकाले भेरियन्ट फैलिन पुगेको देखिन्छ।
‘नेपालमा ढोकामात्रै थुनेर बस्यौं। अन्य रोकथामका केही काम भएनन्। न यो समयमा खोप दिन सक्यौं। न त परीक्षणलगायत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्‍यौं। न समुदायमा कति जनामा संक्रमण छ भनेर सर्वेक्षण नै भयो। विभिन्न कारणले गर्दा अन्य देशमा भन्दा नेपालमा फैलिने सम्भावना बढी नै छ,’ डा. पाण्डे भन्छन्।
यस्तै, जिन सिक्वेन्सिङ हुननसक्दा कुन भाइरसले संक्रमण फैलाइरहेको छ भन्ने कुराको एकिन हुन सकेको छैन।
‘एक बर्षमा ३०–३५ वटा जिन सिक्वेसिङ मात्र गरेर हुँदैन। समुदायस्तरमा कतिमा संक्रमण फैलिएको छ? कतिको एन्टिबडी बनेका छन् भन्ने कुरा भनाइमा मात्रै सीमित भएका छन्,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘कुरा एकातिर काम अर्कोतिर भइरहेको छ।’
‘हामीले सिक्वेन्सिङलाई व्यापक बनाएर नयाँ भेरियन्टलाई समयमै पहिचान गर्ने र नियन्त्रणका कदम चाल्ने कार्यलाई तीव्र बनाउनु पर्छ,’ उनले थपे।
खोप तथा एन्टिबडीले काम गर्छ ?
अहिले डेल्टा प्लस भेरियन्टविरुद्ध कोरोना खोपले कत्तिको काम गर्छ भन्ने विषयमा विश्वभर नै अध्ययन भइरहेको छ।
अहिलेको अवस्थामा यो भेरियन्ट खतनाक देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।
डेल्टाका कारण संक्रमण फैलिने दर धेरै हुने हुँदा यसबाट हुने सार्वजनिक स्वास्थ्यको जोखिम पनि बढी भएको डब्ल्यूएचओको भनाइ छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि नेपालमा तेस्रो लहर रोक्नका लागि १ करोड ५० लाख खोपको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ।
हालसम्म नेपालमा २५ लाख ५६ हजार १२९ जना अर्थात् ८ दशमलब २ प्रतिशत जनसंख्याले पहिलो मात्रा र ७ लाख ४५ हजार ६७० अर्थात २ दशमलब ३ प्रतिशत जनसंख्या मात्रैले दुवै मात्रा खोप पाएका छन्।
तेस्रो लहरको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ३३ प्रतिशत मानिसलाई खोप दिने तयारी मन्त्रालयले थालेको डा. पौडेल बताउँछन्।
अझै पनि नेपालमा करोडौं मानिसहरू जोखिममा छन्।
डोल्टा प्लस भेरियन्टलाई खोप तथा एन्टिबडीले काम गर्ने विषय अनुसन्धानको विषयमा रहेको खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेती बताउँछन्।
‘अहिलेको डोल्टा प्लस भेरियन्टमा एन्टिबडी तथा खोपले कति काम गर्छ भन्ने कुरा अध्ययनको विषयमा छन्,’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘ तर, जुनसुकै भेरियन्ट आए पनि केही न केही काम गर्छ। हामीले १० प्रतिशत काम गर्ने भए पनि खोप सबैलाई दिनुपर्छ।’
भारतमा प्रकोप भएपछि नेपालमा पनि सहज रूपमा फैलिने डा. उप्रेती बताउँछन्।
‘भाइरस नयाँ छ, कति खराब अवस्थासम्म पुर्‍याउन सक्छ, यकिन गर्न सकिँदैन, तेस्रो प्रकोप आए पनि नआए पनि हाम्रो स्वास्थ्य संरचना बलियो बनाउनुपर्छ,’ डा. उप्रेतीले थपे।